Guddoomiyaha Baarlamanka Somalia Maxamed Mursal oo Gaadhay Dalka Jordan. – Samawadenews
Jordan. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha Golaha Shacabka ee DFS Mudane Maxamed Mursal ayaa gaaray Magaaladda Amman (Jordan). Guddoomiye ku xigaha Koowaad ee Baarlamaanka Jordan Ibraahim Alqur’aan ayaa halkaa ku soo dhaweeyey.
Wafdiga Somalia waxa ay halkaa uga qeyb geli doonaan shirka Soddonaad ee deg dega ah ee Midowga Baarlamaanadda Aduunka, qeybta Waddamada Carabta, laguna wado in looga hadli doono heshiiskii qarniga ee Madaxeyne Donald Trump.
Xildhibaan C/qaadir Xaamud ” Dastuurka ha la furo si cabashada Beelaha loo eego”
[Fusilat (Distinguished): 25]